अलैँचीको भाउमा किन यति धेरै गिरावट ? - Koshi Online
काठमाडौँ २४, कार्तिक/ अलैँचीको मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि १० वर्षयताकै सस्तो मूल्यमा अलैँची खरिद , बिक्री गर्नु परेको व्यापारी भन्छन्, ‘अलैँचीको भाउ झन् ओरालो लाग्दैछ, सुधार आउने कुनै छाँट–काँट छैन, ।’ गत वर्ष यही याममा नयाँ उत्पादनको अलैँची प्रतिमन ८० हजारले खरिद–बिक्री भएको । तर अहिले अलैँचीको मूल्य झण्डै तेब्बरले घटेको छ।
गत वर्ष प्रतिकिलो दुई हजार पाँच सयका दरले खरिद गरेको अलैँची अहिले प्रतिकिलो रु ६५० मा झरेको छ। पछिल्लो समय किसानको प्रतिष्ठासँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको अलैँचीको मूल्य घटेपछि नयाँ फसलको कारोबारसमेत बजारमा सुस्त छ। साना व्यापारीले अलैँचीको कारोबार गर्न मानेका छैनन्।
‘विसं २०६५ मा प्रतिमन ३० हजारका दरले अलैँची खरिद–बिक्री भएको थियो’, सक्रान्तिका अलैँची व्यापारी दीपेश सिटौलाले भने, ‘अलैँचीको मूल्यमा ह्वात्तै आएको कमीले किसान मात्र हैन, व्यापारी पनि पीडित भएका छन ।’
मूल्य घटेपछि अलैँची खेतीमा लागेका किसान निराश भएका छन्। व्यवसायीका अनुसार विगत केही वर्ष अलैँचीको उत्पादनमा अत्यधिक ह्रास आएको थियो। उत्पादन घटे पनि व्यवसायीले अलैँची मौज्दात राखेका थिए।
बजारमा अलैँचीको कृत्रिम अभाव भएपछि मूल्य ह्वात्तै बढ्यो। गत वर्षदेखि अलैँचीको उत्पादनमा वृद्धि भयो। उत्पादन वृद्धि भएको र मौज्दात राखेको अलैँची एकैसाथ बिक्री गर्न खोजिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको मूल्य खस्किएको हो।
‘बजारको मागभन्दा उत्पादन बढी भएकाले अलैँचीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको हो’, अलैँची व्यवसायी महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक नेपालले भन्नुभयो। पुर्वका पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभासहित देशका ४० जिल्लामा अलैँची उत्पादन हुन्छ। यी जिल्लाबाट वार्षिक पाँच हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अलैँची विदेश निर्यात हुन्छ।
अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अनुसार यसको निर्यातबाट वार्षिक ६ अर्ब नेपाल भित्रिने गरेको छ। यसमध्ये रु पाँच अर्ब बढी किसानको हातमा पुग्छ। नेपालबाट ९९ प्रतिशत अलैँची भारतीय बजारमा निर्यात हुन्छ।
सुनको भाउ तोलामा १८ सयले घट्यो, आज कति छ ?
तिहारको मुखमा चिनीको बिक्री बन्द, उपभोक्ता मारमा
विश्वका १ सय १२ देशसँग नेपालको व्यापार घाटा, सबैभन्दा बढी चीन र भारतसँग घाटा
सुनको भाउ ६ वर्षयताकै सबैभन्दा महँगो !
अमेरिकी डलरको भाउ ओरालो लाग्न थाल्यो, आज कति छ ?